मिसाइल डिफेन्स छल्ने उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्रः अमेरिका र उसका साझेदारको मुटुमा ढ्यांग्रो !
उत्तर कोरियाको ताजा मिसाइल परीक्षण
भदौ २९, २०७८
लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् ।
Photo : Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
उत्तर कोरियाले शनिवार र आइतवार लामो दूरीको क्रुज क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यम कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीले खबर दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यसबाट उत्तर कोरियाको हतियार प्रविधि निकै विकसित भइसकेको संकेत पाइन्छ । उसले शत्रुको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीलाई समेत छल्दै दक्षिण कोरिया वा जापानमा क्षेप्यास्त्र खसाउन सक्ने भएको छ । त्यसैले उत्तरको यो पछिल्लो परीक्षणबाट आफ्ना साझेदारहरू जोखिममा परेको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
ती क्षेप्यास्त्रहरू १५ सय किलोमिटर टाढा पुगेर तारोलाई प्रहार गर्दै उत्तरकै नियन्त्रणमा रहेको जलक्षेत्रमा खसेको पनि केसीएनएले खबर दिएको छ ।
उत्तर कोरियाले विगत ४० वर्षमा १५० भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । यसले गर्दा उत्तरले प्रतिबन्धको समेत सामना गर्नुपरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तरलाई विशेषगरी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रविधिको परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उत्तरलाई क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गर्न कुनै रोकटोक छैन ।
यद्यपि क्रुज क्षेप्यास्त्रको पछिल्लो परीक्षणलाई विशाल महत्त्वको रणनीतिक हतियार भनेर उत्तर कोरियाले आफू वरपरका क्षेत्रका मुलुकको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ । त्यस क्रुज क्षेप्यास्त्रमा उसले सानोतिनो आणविक वारहेड समेत जडान गरेको हो कि भन्ने आशंका विश्लेषकहरूले गरेका छन् । त्यसो हो भने त्यस हतियारले आमविनाश मच्चाउन सक्छ ।
आफूमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि यो निवारक (डिटरेन्ट) हतियार हो भन्ने तर्क उत्तर कोरियाले गर्दै आएको छ । विशेषगरी दक्षिण कोरियालाई छत्रछायाँ प्रदान गरेको अमेरिकाले आफूमाथि आक्रमण गर्न सक्छ भनी उत्तरले पीर मानिरहेको हुन्छ ।
त्यसो त दक्षिण कोरिया आणविक हतियारसम्पन्न मुलुक हैन । तर आणविक शक्ति अमेरिकाको साझेदारका रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया आणविक छाता अर्थात् न्युक्लीयर अम्ब्रेलाबाट सुरक्षित छ ।
अनि अमेरिका र दक्षिण कोरियाले वर्षैपिच्छे संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने गरेका छन् । एक महिनाअघि मात्र उनीहरूले संयुक्त अभ्यास सम्पन्न गरिसकेका छन् । उक्त अभ्यास आफूविरुद्धको युद्धको तयारी हो भन्ने उत्तर कोरियाको बुझाइ छ ।
त्यसो त अघिल्लो साता दक्षिण कोरियाले पानीमुनिको पनडुब्बीबाट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको थियो । अनि यसैबीचमा अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई क्षेप्यास्त्र निर्माणका विषयमा लगाएका सबै सीमाहरू खुकुलो बनाइदिएको छ । त्यसले पनि उत्तर कोरियालाई थप सशंकित बनाएको हुनुपर्छ र क्षेप्यास्त्र परीक्षणमार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।
हुन त उत्तर कोरियाले बेलामौकामा हतियार परीक्षण गरिरहेको हुन्छ तर अहिले यसबेलामा उसले परीक्षण गर्नु कूटनीतिक सन्देश दिने प्रयास हो भनी विश्लेषक एन्ड्रु सालमोनले एसिया टाइम्समा लेखेका छन् ।
उनका अनुसार, उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि सुङ किमले जापानको भ्रमण गर्न लागेको सन्दर्भ पारेर उत्तरले क्रुज क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो । सोमवारदेखि बुधवारसम्म टोकियोमा चलिरहेको जापानी तथा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा किमले उत्तर कोरियाको पछिल्लो परीक्षणका विषयमा चर्चा गरेको खबर जापान टाइम्सले दिएको छ ।
यस परीक्षणपश्चात् पनि उत्तर कोरियासँग वार्ताको ढोका बन्द नभएको सुङले बताएका छन् । उत्तर कोरियाका अधिकारीहरूले जहिले र जहाँ चाह्यो भेट्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीय शान्तिका लागि उत्तर कोरियालाई वार्तामा ल्याउनैपर्ने दबाब विशेषगरी जापान र दक्षिण कोरियाले अनुभव गरेका छन् । उनीहरू नै उत्तरको हतियारको प्रमुख निशाना हुन् । तर उत्तरको हतियार क्षमता यी दुई मुलुकको भन्दा निकै बढी भएकाले उसले यिनीहरूलाई टेर्दैन । उसको सीधा प्रतिस्पर्धा त अमेरिकासँगै छ ।
किम जोङ उनलाई अमेरिकासँग पुनः वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा अघि बढ्नुछ । किमले पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएको भए पनि निःशस्त्रीकरण तथा प्रतिबन्ध फुकुवाको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसले किमलाई निराश बनाएको छ ।
बहालवाला राष्ट्रपति जो बाइडन चाहिँ किमका कटु आलोचक हुन् । उनले किमका लागि ठग भन्ने शब्द नै उपयोग गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध जारी रहेकाले गर्दा पनि किमलाई अहिले देशको शासन चलाउन गाह्रो परिरहेको छ । पोहोर सालको बाढीपहिरोका कारण देशमा खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ भने कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नका लागि चीनसँगको सीमा बन्द गर्दा व्यापार पनि ठप्प छ । उत्तर सामान खरिदका लागि चीनमा पूर्ण निर्भर छ ।
त्यसैले उत्तर कोरियामा अहिले भोकमरीको स्थिति आउन लागेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सन् १९९० को दशकमा आएको विकराल भोकमरीको जस्तै स्थिति अहिले पनि आउन लागेको देखिन्छ । आर्थिक संकटको व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेकै कारण किमले केही समयअघि एउटा सैन्य परेडमा आँखाबाट आँसु चुहाउँदै कोरियाली जनतासँग माफी समेत मागेका थिए ।
विश्व समुदायबाट अलगथलग रहेको उत्तर कोरियाको कूटनीतिक पहल सार्थक परिणाम दिने खालको नभएकाले हतियार परीक्षण गरेर किमले सुरक्षा जोखिमका बारेमा विश्वलाई अवगत गराउँदै आफ्नो शर्तमा वार्ता गराउनका लागि प्रयास गरेका हुन सक्छन् । त्यो शर्त भनेको कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार आत्मसमर्पण नगर्ने हो ।
हुन पनि आणविक हतियार परित्याग गरेपछि इराकका सद्दाम हुसेन र लिबियाका मुअम्मार गद्दाफीलाई अमेरिका र नेटोले बेइज्जतीपूर्ण सत्ताच्युत तथा हत्या गरेको देखेका किमले आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा रहेको आणविक हतियार कार्यक्रम परित्याग गर्न इच्छा बिल्कुलै देखाउने छैनन् ।
एन्ड्रु सालमोनका अनुसार, अफगानिस्तानमा बेइज्जती खपेर कूटनीतिक रूपमा हच्किएको अमेरिकाले उत्तर कोरियाप्रति कठोर रवैया नअपनाउला भन्ने अनुमान गर्दै किमले यो पछिल्लो परीक्षण गराएका हुनसक्छन् ।
अमेरिकाले उत्तरमाथिको प्रतिबन्ध झन् कसिलो बनाउने प्रस्ताव गरेछ भने पनि उससँग चिसो सम्बन्ध राख्ने चीन र रुसले त्यसलाई सुरक्षा परिषदमा रोक्लान् भनी उत्तरले दाउ खेलेको हुनुपर्छ ।
बाइडन प्रशासनले उत्तर कोरियालाई खासै वास्ता गरिरहेको देखिँदैन । चीनसँगको पछिल्ला वार्ताहरूमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको कुरा खासै नझिकेकाले उसको प्राथमिकतामा उक्त देश नपरेको संकेत पाइन्छ ।
त्यसैले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनका लागि उत्तर कोरियाले पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हुनसक्ने सम्भावना छ । अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सन्देश पनि यस परीक्षणले दिएको देखिन्छ ।
एमाले नेतृत्व चयन विधि: इलेक्सन कि सेलेक्सन ?
महाधिवेशन आउन ४ दिन छँदा एमाले नेताहरूको हालत– ...
विदेश नीतिमा मोदीको चुक : अमेरिका र चीनलाई ब्याल...
७६ वर्षकाले सभापति ताकेको कांग्रेसमा छानिएका नाति...
एमाले महाधिवेशनमा पूर्व माओवादी खेमा सम्मानजनक हैसियतमा आउँछ– लिलबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता]
मंसिर ७, २०७८
अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही छैन, अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ– पीएस गुरुङ [अन्तर्वार्ता]
मंसिर १, २०७८
यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]
कात्तिक २५, २०७८
संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस: सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यी प्रावधान राखौं
मंसिर ८, २०७८
सरकार, जति लेख्दा पनि भएन; कि धूलो खाएर मर भन्, कि ठेकेदारलाई मृत्युदण्ड दे !
... अनि मात्र बारको आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ– डा. युवराज संग्रौला
डा. युवराज संग्रौला
मंसिर ६, २०७८
न्यायालय सुधारको नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’
किसानलाई आश्वासन होइन, राहत देऊ
कात्तिक ५, २०७८
दशैंको मुखैमा भएका दु:खद् दुर्घटनाका दोषी खोज सरकार
असोज २७, २०७८
सुत्ने समयमा यी ८ चीजबाट सँधै टाढा रहनू
मान्छे जन्मले होइन, कर्मले महान् हुन्छ : चाणक्य
कोभिडको ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’ भारतमा पनि देखापरेपछि उच्च सतर्कता अपनाइने
एमाले महाधिवेशन : झापाका १७ जना केन्द्रीय कमिटीका आकाङ्क्षी
समाजवादी आम जनताको हित गर्ने पार्टी हो : अध्यक्ष नेपाल
ओलीले सहमतिको नाममा मृत्युको आँसु बेच्न थाले, मेरो उम्मेदवारी कायम छ– घनश्याम भुसाल
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गरौँ– वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
चुनावमा पहिलो पार्टी बनेर माओवादीले देश विकासको नेतृत्व लिन्छ : पम्फा भुसाल (भिडियोसहित)
भीम रावललाई ओलीको जवाफ– चुनाव लड्छु भन्नेको अधिकार खोसिँदैन, उम्मेदवारी दिन पाइन्छ